5 Best Local Drinks kunwa Edza In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Local Drinks kunwa Edza In Europe
Europe ndiyo nzvimbo musangano chinoshamisa zhinji dzakasiyana - uye culinary tsika. rudzi ose ine kuri pachena pachavo, izvo zvinokwezva vashanyi chaimo nhoroondo yaro uye nezvose rinopa. Uye mune dzimwe nyika, kuti kunorevawo huya hunenge zvinwiwa!
Vaya vanofamba rokumutsa mukanwa wako uye vamwe veko vanotenderwa mafaro vachanakidzwa kushanyira nyika idzi. Heano pamusoro yedu 5 yakanakisisa nekuzvimwira dzomunharaunda kunwa uye edza mu Europe:
Limoncello ari inoshamisa Italian nokugadzirwa kuti unogona kuwana zvose munzvimbo iyi nyika yakanaka. zvisinei, kana uchida kuedza ndimu ichi chiedza nezvinobata kwakasimba, musoro kuti Amalfi. There, pamusoro wakanaka Amalfi Coast, vanoita limoncello kubva yakanakisisa Lemons muItaly yose. The yepakutanga resipi anoita ichi drink kuravidza sezvinoita anonhuhwirira remonedhi kuti chete zvishoma inotapira. zvisinei, sveta nayo zvishoma nezvishoma uye nokungwarira, nekuti simba raro anogona kutora iwe romuromo.
Nokuti waini anoda, mumwe yakanakisisa vemo rinonwa kuedza muEurope dzaizondisema kuva Bordeaux waini. Kunyange zvazvo riri yakakurumbira ekisipoti French, chokwadi chiitiko kuti mharidzo iyi waini nemasango apo zvokuBordeaux. A waini rwokuparidza iri nzira yakarurama kuongorora nharaunda dzayo waini. Chii chimwe, uchadzidza zvakawanda pamusoro kuita waini, Vakamupfekedza chateaus, uye microclimates.
Kana ukaona muLondon munguva yezhizha, iwe havangagoni kusiya pasina zvakabudiswa Pimms Cup. Zvakanga James Pimm ndiani akatanga kunwa pakati pezana 1800s, uye akashanda nayo mukombe guru kuti iye wakapiwa zita rake. Chinhu inozorodza zvinobata kuti rinobatanidza fizzy remonedhi uye Pimms No. 1, uyewo muchero zvidimbu uye chemindi nhungirwa. Absolutely zvinonaka, uye akakwana kuti kunakidzwa musi yezhizha nyoro mubindu marongero, Pimms Cup chido mudano iwe.
In Germany, Schnaps ndiyo amburera izwi kuti simba doro kuti anogona kuva zvakasiyana siyana siyana. Semuyenzaniso, unogona kuva fruity Schnaps kana mushonga inobva mumwe. Hazvinei munhu wamunosarudza, unenge une munharaunda akakurumbira zvinobata kuti zvichaita kumutsa mweya Germany. The veko vanoda kuva Schnaps pashure hombe, rinorema kudya, apo simba rayo anobatsira vane kugaya. saka kana uri mu Germany, inzwa wakasununguka mabiko uye anwe vakakwira!
Belgium kwakafanana doro, zvichida kunyange kupfuura Germany ndiyo. Asi pakati zvose zvinoshamisa emo beers zveBelgium, uriko zvichaita kuchivabudisa iwe retsoka dzenyu. Abbey beers, aizivikanwawo Trappists, dzakakurumbira kwazvo Belgium, asi Westvleteren Abbey doro ndiye rarest mumwe. Kundoitora, unofanira kuchengetera kubva Abbey 60 Mazuva mberi nguva. zvisinei, zvakanaka zviripo dambudziko.
Ready kunakidzwa zvakanakisisa zvinwiwa vemo Europe anogona kupa? Rongedzai mabhegi ako, kuita zvirongwa zvenyu, uye musoro Kuponesa A Train kuti Book Your Train Tickets kuona Europe ari chiedza yose yakasiyana!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Local Drinks kuti Edza mu Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-local-drinks-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#zvinwiwa #traveleurope Itari London travelbelgium travelfrance travelgermany traveltips